सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी नगरि गरिबलाई कार्ड, सामाजिक भेद्भावको पराकाष्ट | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी नगरि गरिबलाई कार्ड, सामाजिक भेद्भावको पराकाष्ट
प्रकाशित मिति २९ असार २०७५, शुक्रबार १७:३५ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । सरकारले गरिबहरुलाई दिने सेवा सुविधाको टुंगो नलगाइकन गरिब घरपरिवारका लागि परिचयपत्र वितरण सुरु गरेर दुनियाँ हसाएको आरोप जनताले लगाएका छन । २६ जिल्लामा पहिचान भएका गरिब परिवारका लागि शुक्रबारबाट परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको हो ।
सरकारले गरिबीका आधारमा तीन प्रकारका काड वितरण गर्नेछ । चरम गरिबले रातो कार्ड पाउनेछन् भने मध्यम गरिवले पहेँलो कार्ड र सामान्य गरिबले नीलो कार्ड पाउनेछन् ।
मानव विकास सूचकांक भन्दा तल रहेका जिल्लाहरुबाट परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अनुसार अब १ लाख ८८ हजार २ सय ३२ परिवारले रातो, १ लाख २९ हजार ७५४ ले पहेँलो र ८३ हजार ८४५ परिवारले नीलो कार्ड पाउने भएका छन्।
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले पहिलो चरणमा २५ जिल्लाबाट १२ लाख ४० हजार परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । त्यसबाट ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवारलाई सरकारले ‘गरीब’ कारुपमा पहिचान गरेको थियो ।
सरकारले ०६८ सालमै २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको विवरण संकलन गरे पनि उद्देश्यअनुरुप काम भने हुन सकेको छैन । त्यतिबेला एक वर्षभित्रै गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र दिने लक्ष्य लिइएको थियो ।
गरिबलाई हिनताबोध हुने कदम
परिचयपत्र पाएकाहरुले सरकारबाट के सेवा सुविधा पाउने भन्ने जानकारी सरकारी अधिकारीलाई नै छैन । उनीहरुलाई राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यन्न, लगायतका विभिन्न सेवा सुविधामा सहुलियत र अनुदान दिने योजना त छ । तर, अहिलेसम्म कस्ता सहुलियत दिने भनेर टुंगो लगाइएको छैन ।
गरिबको परिपत्र दिएर सरकारले जनताको अपहेलना गरेको जस्तो देखिएको छ । सरकारले नै गरिब भनेर छुट्यापछि उसले व्यापार व्यावसाय गर्न बैकबाट ऋण लिनलाई समेत मुस्कील बनाउने प्रयास गरेको केहि अगुवाहरुले दुखेसो छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले बाँकी ५१ जिल्लामा पनि गरिब परिवार पहिचान गर्न प्रश्नावली तयार गरेको छ । ती ५१ जिल्लामा आगामी दुई बर्षभित्र गरिब परिवारको पहिचान गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
अत्यधिक गर्मीका कारण मुटु फुटेर तीनदिनमा ६५ जनाको मृत्यु
इस्लामावाद । पाकिस्तानको दक्षिणी बन्दरगाह शहर कराँचीमा तातो हावाको कारण ६५ जनाकाे मृत्यु भएको छ ।
तातो हावाले जीवन…
सुरक्षा ‘थ्रेट’का आधारमा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको स्तर वर्गीकरण, पूर्वराष्टपतिलाई आजीवन सुरक्षा !
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा ‘थ्रेट’का आधारमा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको स्तर वर्गीकरण गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
काठमाडौं । अवैध भिओआइपीमार्फत कल बाइबास गर्ने धन्दामा मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको संलग्नता रहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले देखाएका छन् ।…
पुनः चर्चामा प्रिया प्रकाश
काे-काे लिन्छन् घरधनी सांसद र मन्त्री क्वार्टर बस्ने मन्त्रीले संसदबाट घरभाडा 110 views
समिटमा ठुला नेताले विदेशि अतिथिसँग भेटेको र सम्पादकहरुले हायतमा रक्सी पिएको फोटो वाहिर ल्याउः एकनाथ ढकाल 81 views
सैनिक नियमावली संशोधनले जर्नेल–कर्णेललाई हाइसन्चो 54 views
नुवाकाेट दुर्घटना अपडेट: १७ काे शव भेटियो, भीरमा टर्च बालेर शव खोज्दै प्रहरी 41 views
यसरी फस्छन निर्दोष डाइभर साउदी अरवमा 28 views
फेवातालमा खसेका युवाको शव फेला पर्यो 23 views
राज्य सञ्चालन भूमिगत गिरोहले नै चलाएको हो ? 20 views
एयर एसियाले बुझाएको साढे ११ करोड हिनामिना, संम्लगन कर्मचारीहरू केन्द्रमा 13 views
नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको घ्याङफेदीमा आइचर दुर्घटना, ३० को मृत्यु 11 views